प्रोफेसर र एसोसिएट प्रोफेसर: यो शैक्षिक शीर्षक वा उच्च स्कूलमा स्थितिहरू?
सापेक्ष शैक्षिक डिग्री अक्सर प्रश्न उठ्छ: यो के हो र कसरी प्राप्त गर्ने? यस लेखमा हामी के एक docent व्याख्या हुनेछ। यो शब्द एक साथ धेरै अवधारणाहरु अनिवार्य समान छन् निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले, एसोसिएट प्रोफेसर - विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरू को शैक्षिक शीर्षक छ। दोश्रो, वैज्ञानिक संस्थाहरू को कर्मचारीहरु को डिग्री। तेस्रो, उच्च विद्यालय मा स्थिति। "प्रोफेसर" को अवधारणा संग धेरै सजिलो - यो अत्यधिक विज्ञान विशेषज्ञ को एक विशेष क्षेत्र मा कुशल छ जो एक व्यक्ति छ।
कसले एसोसिएट प्रोफेसर को शीर्षक सम्मानित गरियो?
विश्वविद्यालय मा सहायक प्राध्यापक को स्थिति मा हुन - अधिकार गर्न होइन उन्नत डिग्री छ, शिक्षा र विज्ञान को क्षेत्र मा पर्यवेक्षण लागि वैज्ञानिक संस्था (वा उच्च शिक्षा को संस्था) को शैक्षिक परिषद द्वारा तोकिएको छ जो र स्वीकृत संघीय सेवा द्वारा। यो डिग्री जीवनको लागि सम्मानित गरिएको छ।
तथा "एसोसिएट प्रोफेसर" शीर्षक assigning लागि मापदण्ड:
स्थिति को शीर्षक छ विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरू नियुक्त गरिएको छ गर्छन विज्ञान को उम्मेदवार, वैज्ञानिक परिषद एक प्रतिस्पर्धी चुनाव पछि;
वैज्ञानिकहरूले एसोसिएट प्रोफेसर को डिग्री सम्मानित (पहिले - "वरिष्ठ वैज्ञानिक");
lecturers र थप5वर्ष को वैज्ञानिक र शैक्षणिक कार्य अनुभव को उच्च शैक्षिक संस्थाहरू शिक्षकहरूको गर्ने कम्तिमा एक वर्षको लागि एक एसोसिएट प्रोफेसर रूपमा काम गरेको छ र वैज्ञानिक काम भइरहेको पनि यो शीर्षक प्राप्त गर्न सक्छ।
को सहायक प्राध्यापक के गर्छ?
यसरी, एसोसिएट प्रोफेसर - जो एक शैक्षिक डिग्री "उम्मेदवार" संग lecturers, अनुसन्धानकर्ताहरूले र व्यक्ति प्राप्त गर्न सक्छन् विश्वविद्यालय वा शैक्षिक शीर्षकमा एक स्थिति छ।
आफ्नो काम के हो?
पीएचडी methodical र शैक्षिक काम हो।
यसलाई आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धान विद्यार्थी मा निर्देशन प्रदान गर्दछ।
उहाँले, व्याख्यान अध्ययन र आयोजित अनुसन्धान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परिणाम शामिल।
वैज्ञानिक र शैक्षणिक कर्मियों तयार।
को "प्रोफेसर" को हुनुहुन्छ?
ल्याटिन शब्द "प्रोफेसर" बाट अनुवादित अर्थ "शिक्षक।" , अनुसन्धान सञ्चालन, उहाँले विश्वविद्यालयहरु सिकाइएको छ के मा लगी भएको छ राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था आफ्नो परिणाम शुरू, शिक्षालाई र अनुसन्धान कर्मचारी तयार अनुसन्धान विद्यार्थी र निजी पाठ पर्यवेक्षण। प्रोफेसर - एक उच्च शैक्षिक संस्था यस रैंक र स्थिति। पहिलो लागि यो आवश्यक छ:
"विज्ञान डाक्टर" को एक डिग्री आफ्नै आविष्कार वा वैज्ञानिक काम छ। यो स्थितिमा सफलतापूर्वक काम गर्न कार्यालय प्रतियोगिता "विभाग को हेड" वा एक वर्ष को लागि निर्वाचित हुन।
प्रोफेसर कम्तिमा एक वर्ष को एक पोस्ट मा काम गर्न, एक ठूलो वैज्ञानिक र शिक्षण अनुभव, आफ्नै लेखोटहरू छ।
हुन अत्यधिक योग्य विशेषज्ञ कुनै पनि वैज्ञानिक शीर्षक बिना ठूलो औद्योगिक अनुभव। स्थिति एक प्रतिस्पर्धी आधारमा एक शैक्षिक परिषद तोकिएको गर्न सकिन्छ।
एक श्रेणी र स्थिति दुवै छ - यस लेखमा हामी शब्द "प्रोफेसर" "एसोसिएट प्रोफेसर" रूपमा सिके। काम को अवधि - पहिलो मामला मा मात्र दोस्रो हुँदा, जीवन को लागि तोकिएको छ। एसोसिएट प्रोफेसर र प्रोफेसर को शीर्षक अर्थ मा समान छन्। तिनीहरूलाई कमाउन एकदम गाह्रो, तपाईं साँच्चै आफ्नो क्षेत्रमा बुझ्न र एक विशेषज्ञ हुनु आवश्यक छ।
समस्याका - यो के हो?
असामान्य पशु: कोमोडो ड्रेगन
को समाधान को लागि चुनौती र तिनीहरूलाई सुलझाने को विधिहरू
आर्थिक प्रणाली को प्रकार
अखरोट को लाभ के हुन्?
स्पष्ट छाला कुरूप: के मुखासे मद्दत गर्छ
सानो कुकुर नस्लों: मर्मतसम्भार र हेरविचार को सुविधाहरू
पानी मा रंग परिवर्तन कार: बच्चाहरु को लागि एक नयाँ मनोरञ्जन
कसरी नस देखि रगत लिन
Barboskinyh परिवार। यस कार्टून को मुख्य वर्ण "Barboskiny"
"Minoleksin" मुखासे: समीक्षा, प्रयोग र analogues लागि निर्देशन